Heshiis horudhac ah oo laga gaaray hurgumadii colaadeed ee gobolka Karkaar iyo shirweyne loo ballamay. – Radio Daljir
Oktoobar 12, 2011 12:00 b 0
Qordho, Oct 12 ? Heshiis is-afgarad oo hordhaca ayaa laga gaaray xurgufihii colaadeed ee dhawaan ka dhacay deegaanno miyi ah oo ka tirsan gobolka Karkaar kuwaasi oo dhaliyey khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu una dhexeeyey beelo ood-wadaag ah.
Mas?uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland, kuwa maamulka gobolka Karkaar iyo odayaal dhaqameed meelo kala duwan ka yimid ayaa dhawrkii todobaad ee ugu dambeeyey ku hawlanaa qorshe waan-waaneed xal looga raadinayo xiisaddaasi karkaar, kuwaasi oo haatan ka gun-gaaray intii badnayd dhibihii dhacay.
Guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqur?aan Maxamed Aadan, oo xubin ka ahaa mas?uuliyiintii dawladda ee ku hawlanaa muddada dheer maaraynta mushkiladdaasi colaadeed una warramay maanta Radio Daljir ayaa sheegay in ay guulo la taaban karo ka gaareen nabad ku soo dabaallidda eheladii is-xumaansaday kuna dagaallamay deegaannada ka mid ah gobolka Karkaar.
Md. Cabdiqur?aan, waxaa uu sheegay in waxyabaaha badan la isla meeleeyey, kuwaasoo ay ka mid yihiin kala durkinta mellayshiyaadkii diriray, wadaagidda daaqsinta iyo deegaanka, ka xaalitaanka dhibihii dhacay iyo qabashada shir weyne raag-raaca wax kala tabashda laguna turxaan bixiyo is-xumaansiga.
Guddoomiyuhu, waxaa uu intaas ku daray dhammaan waxyaabahaasi la isla meeleeyey in ay u hoggaansameen eheladii colaaddu u dhex-tiillay.
Sikastaba ha ahaatee xaaladda ayaa u muuqatay maalmihii ugu dambeeyey mid ka soo raynaysa kaddib markii loo guntay xal-u-helidda lurtaasi colaadeed oo ahayd mid muddo soo laalaabatay.
M/weynaha Puntland iyo wafti uu hoggaaminayo oo ka dhoofay Garowe, kuna sii jeeda Ingiriiska.
“Waa muhiim in bulshadeenu fahmaan in garoomadu yihiin muraayadii dalka, ka qayb qaataan dayactirka garoomada Puntland” Wasiirka Duulista & Garoomada.